I-Bora Bora, ipharadesi elingajwayelekile eFrench Polynesia | Izindaba Zokuhamba
IBora Bora isibe ngesinye sezindawo ezinhle kakhulu uma kukhulunywa ngokujabulela iholide langemva komshado kanye neholide e indawo exotic. Kumele kushiwo ukuthi indawo yokunethezeka, kepha impela iyindawo ekahle yeholide ekhetheke kakhulu, echibini elicwebezelayo elihlala emakamelweni anezinhlobo zonke zokunethezeka.
IBora Bora itholakala eFrench Polynesia, futhi akuyona indawo enabantu abaningi, ikakhulukazi ngenxa yokuthi sincane kangakanani isiqhingi futhi ngoba akuyona yonke iminotho engakwazi ukusithenga. Kukhona isiqhingi esikhulu bese kuba khona 'ama-motus' ahlukene noma iziqhingana ezincane ezingenazo izintaba, imvamisa kuphela uhlaza oluncane. Akuyona indawo yelanga nolwandle kuphela, kepha futhi iyindawo yokuthola isiko lasendulo elikhetheke kakhulu.
1 Umlando omfushane weBora Bora
2 Imininingwane ebalulekile yokuhamba
3 Yini okufanele uyibone futhi uyenze eBora Bora
Umlando omfushane weBora Bora
Ngokomthetho, isiqhingi ngasinye ePolynesia sasinganyelwa yisikhulu sendawo ngokuzimela. Cishe ngonyaka we-1700 amaNgisi aphatha izindawo eziningi, ezaqhubeka kwaze kwaba ngekhulu le-XNUMX, lapho amaFulentshi eshiya amaNgisi futhi ethola amandla, eba yi I-French Polynesia yamanje. Namuhla, yize kube neminyakazo ethile ethanda inkululeko, imithetho yezepolitiki ikubeka kucace ukuthi iFrance ngeke izidele lezi zindawo zaphesheya kwezilwandle.
Imininingwane ebalulekile yokuhamba
IBora Bora itholakala enyakatho-ntshonalanga yeTahiti, naseningizimu yeHawaii, futhi ikhona yakhiwa intaba-mlilo engasekho lokho akusasebenzi. Izungezwe yichibi elihlukaniswe nolwandle yidwala lamakhorali, elenza libe yindawo enokuthula nenhle yokunqamula.
Ukufika esiqhingini kuyadingeka dlula esikhumulweni sezindiza saseTahiti, usebenzisa insizakalo yenkampani ye-Air Tahiti. Cishe emizuzwini engu-50 ungafika esikhumulweni sezindiza iMotu Mate, enyakatho-mpumalanga. Lesi siqhingi esincane noma i-motu itholakala emizuzwini engu-30 ukusuka eVaitape, okuyidolobha eliyinhloko laseBora Bora. Ukusuka esikhumulweni sezindiza kufanele uthathe isikebhe ukuze ufike ezindaweni ezahlukahlukene, futhi okuhle ukuthi ngaphambili uvumelane ngokudluliswa nehhotela. Azikho izinto zokuhamba zomphakathi kulesi siqhingi, ngakho-ke kufanele uqashe imoto, uye kwi-jeep safaris noma uzulazule ngebhayisikili noma ngehhashi, kanye nezikebhe ezisuka kwesinye isiqubu ziye kwesinye. Enye indlela yokufika lapho usuka eTahiti ukusebenzisa izikebhe ezihamba ngezikebhe, yize zinganconyiwe kakhulu ngoba zihamba kancane futhi zinezinsiza ezimbalwa.
Imibhalo ezoba letha yiphasipoti uma sizoba ngaphansi kwezinyanga ezintathu, ne-visa uma ukuhlala kukude. Imali yiFrance French franc, futhi cishe ama-franc angama-120 alingana ne-euro eyodwa. Into enhle ukushintsha imali esiqhingini, emahhotela afanayo, kuma-ATM noma emabhange, kwezinye izindawo baze bamukele nama-euro.
Isimo sezulu sinikeza Ama-degree angama-25 kuye kwangama-30 unyaka wonke, kodwa isikhathi esihle kakhulu kusuka ngoMeyi kuya ku-Okthoba, ngoba kunezinyanga lapho kunomoya onamandla khona. Izinyanga zikaMeyi, uJuni, uSepthemba no-Okthoba zingcono kakhulu ekuhlanganisweni kwesikhathi nokuhlelwa kwendawo yokuhlala.
Yini okufanele uyibone futhi uyenze eBora Bora
Phakathi nezinsuku zokuqala, into enhle ongayenza ukuphumula, ukujabulela amakamelo amahle asemanzini kanye nethafa elicwebezela njenge-crystal. Lapho sesiluleme ohambweni, singaqala ukujabulela imisebenzi. Vakashela ichweba ngesikebheEzikebheni ezingezansi zengilazi, ukubona phansi kucace kangako, ukubhukuda ngesikebhe, ukubhukuda noma ukutshuza kungenye indlela enhle. Lesi siqhingi sincane, sinamakhilomitha-skwele angaba ngu-30, kunechibi elikhulu elingaphakathi, elizungezwe ama-motus, enye yezindawo ezinhle kakhulu yiMotu Tapu, futhi ungavakashela neziqhingi eziseduze zeTahaa noma iRaia Tea kulezi zikebhe.
Olunye uhambo abantu abathanda ukudilika okungafanele luphuthelwe yilo vakashela e-coral reef. Kuyo ungabona impilo eningi engaphansi kwamanzi, wenza imidlalo yezamanzi. Ungajabulela nokushona kwelanga kusuka ku-katamaran.
Uma ufuna ukubona izilwane zasolwandle zemvelo, ungakwazi iya epaki yasolwandle iLagoonarium, esiqhingini esizimele. Lapho ziyabonakala futhi kungenzeka ukubhukuda nezilwane ezinjengezinhlanzi ezingaphandle, amahlengethwa, imisebe noma izimfudu. ELe Meridien unenye ipaki yasolwandle enezinhlobo ezingaphezu khulu zezimfudu zasolwandle uma ufuna ukwazi lesi silwane ngokujulile.
Una uhambo lokuya entabeni i-Otemanu kungenye into ebalulekile. Yakhiwa yintaba-mlilo yasendulo engasasebenzi, futhi ungayijabulela indawo ebukeka njengangaphambili. Kukhona nokuvakasha ku-4 × 4 ngesiketi sentaba, ungakhuphuka, noma uthathe uhambo lokuyobona izinsalela zeMpi Yezwe Yesibili.
Lolu hambo luzoba nethuba lokuthi jabulela i-gastronomy exotic. Zama ukuminyana okwenziwe ngezithelo ezingafani nezintsha, noma zama izitsha zokudla kwasolwandle. Kuphiwa i-Cuisine eyingxube yezitsha zaseFrance nezamazwe omhlaba ngaphezu kokukhethekile kweTahiti. I-Uru iyimifino ejwayelekile yasePolynesia, futhi ungazama i-yam, imifino yezimpande. Ngokuqondene neziphuzo, kukhona ama-cocktails amnandi njengeBanana Coralia, nobhanana omusha, ujusi kalamula, isiraphu ye-sitrobheli nokhokhonathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ezothando » IBora Bora, ipharadesi eliyingqayizivele eFrench Polynesia
Yini engathwalwa emithwalweni?